Miralem Pjanić oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo kooxo ay ka mid yihiin Chelsea, Manchester City, PSG iyo Real Madrid – Gool FM
Miralem Pjanić oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo kooxo ay ka mid yihiin Chelsea, Manchester City, PSG iyo Real Madrid
Dajiye June 12, 2019
(Italy) 12 June 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Juventus iyo xulka qaranka Bosnia ee Miralem Pjanić ayaa ka hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ka tagayo Bianconeri, inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Miralem Pjanić ayaa ka qeyb galay kulankii ay xalay xulkiisa Bosnia kula ciyaaray Talyaaniga isreeb reebka koobka qaramada Yurub ee Euro 2020, kaasoo xulka Azzurri uu ku adkaaday 2-1.
Ciyaarta kaddib Miralem Pjanić ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay:
“Waan ku faraxsanahay kooxda Juventus, waxaan u maleenayaa in qof walba oo naga mid ah uu jecelyahay kan kale, waxaan dareemayaa degenaan, waxaan haystaa heshiis afar sano ah ee aan kula jiro kooxda Juventus, mana ahan inaan dareemo wax walwal ah”.
“Xaalada Torino si fiican ayeey u socotaa, waxaan xiriir wanaagsan la leeyahay taageerayaasha iyo maamulka kooxda, marna kuma fekerin inaan ka tago Juventus”.
Waxaa xusid mudan inay jireen warar ku aadanaa in Miralem Pjanić uu ka tagayo Juventus xagaagii lasoo dhaafay, iyadoo lala xiriirinayay kooxaha Chelsea iyo Manchester City, laakiin kooxda Bianconeri ayaa diiday inay iska iibiso.
Kooxo dhowr ah ee qaarada yurub ayaa waxay doonayaan inay gacanta ku dhigaan adeega Miralem Pjanić oo ay ugu horeyaan Paris Saint-Germain iyo Real Madrid.
Muxuu Kylian Mbappe ka yiri su'aasha mar walba la weydiiyo ee la xiriirta inuu Real Madrid kusii jeedo?
Real Madrid oo war rasmi ah kasoo saartay xilliga ay soo bandhigi doono Eden Hazard